Furaadhan qixxaatoota furuuf
Kayyoon adeemsa furaas gatii jijjiramoota kan qixxaatton gati ol'aantoo galtii man'ee akkasuma kan"kayyoo" jedhamu barbaaduuf oola. Gatiin galtii man'ee ol'aantoo,gad'aantoo ykn gatii kennameeti kan dhiyaatu keessaa filachuu dandessa.
Gatiin jijjiirama jalqaba hangii man'ee reektaangulaawaa kan sanduuqniMan'eewwwan jijjiiriikeessatti saagama.
Man'eewwaan murtaa'oof ittisamoota qindeessuuf walfaannee haloota murteessoo ta'an hikuu dandeessa.Fakkeenyaaf,jijjiramoota ykn man'eewwwaan man'eewwaan biraa kan hin caalle ykn gatii kennamee irra kan hin caalle ittisamootasa qindeessu dandessa. Akkasummas ittisaamoota jijjiramaan isaa tokko ykn isa oli dirqiin intiijera ta'ee(gatiin kan kurnyee hin taane),ykn gatiiwwaan lamee(kan 0 fi 2 qoofti eeyyamamedha).
Title is: Furaa